Zimbabwean Civil Servants' Residential Land Scheme Begins - allAfrica.com
Zimbabwean Civil Servants' Residential Land Scheme Begins
At least 500 000 government workers are expected to benefit in the housing scheme, reports say.
Zimbabwe: All Set for Civil Servants Residential Land Rollout
Government will roll out the civil servants housing scheme this month and the process begins with workers signing stop order forms, an official has said. Secretary for Local… Read more »
Zimbabwe: Mugabe to Pay Bonuses to Civil Servants to Avert Strike
President Robert Mugabe's government has agreed to pay civil servants their missing 13th month cheques to avert a damaging strike - but where will it get the money from? Read more »
Zimbabwe: Govt Agrees to Pay 2016 Civil Servants Bonuses
New Zimbabwe, 6 March 2017
Government has agreed to pay the 2016 bonuses for its workers over five months from April following a crunch meeting with union leaders on Monday, starving off a planned strike by… Read more »
Civil servants(file photo).
Is Zimbabwe a 'Nation Under Siege'?
According to The Standard, the nation faces a state of "siege" as civil servants prepare to embark on what Public Service and Social Welfare Minister Prisca Mupfumira has described ... Read more »
Zimbabwe: Mugabe, First Lady Misread Mood